ရှန်ဟိုင်း၊ တရုတ်အမှတ်တံဆိပ် Sunbright မော်ဒယ်နံပါတ် SUN-7062 စွမ်းအင်အရင်းအမြစ်လျှပ်စစ်အာမခံသက်တမ်းတစ်သက်တာကုန်ပစ္စည်း ၀ န်ဆောင်မှုပြန်လည်ပေးအပ်ခြင်းနှင့်ပြန်လည်လဲလှယ်ခြင်းပစ္စည်းသတ္တု၊ ပလပ်စတစ်သက်တမ်း ၁ နှစ်အရည်အသွေးအသိအမှတ်ပြုလက်မှတ်ရတူရိယာအမျိုးအစားခွဲခြားခြင်းအဆင့် (၂) လုံခြုံမှုစံသတ်မှတ်ချက်မရှိအမျိုးအစားစျေးပေါစျေးတိရိစ္ဆာန် ECG Display7အရောင် LCD တို့ထိဖန်သားပြင်အလွန်ပါးလွှာသောဒီဇိုင်းအရောင်းသည် SD ကဒ်၊ USB disk ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်းနည်းလမ်းများလက်စွဲ / Auto / Arrhythmia Lead 12 ECGNET ကို ဦး ဆောင်သည်။
ဆေးရုံနှင့်ဆေးခန်းရှိလူကြီးများအသုံးပြုရန်အတွက်အရောင်းရဆုံးချန်ပီယံ Hospira ပြုတ်ရည်စုပ်စက်
ရှန်ဟိုင်း၊ တရုတ်အမှတ်တံဆိပ် Sunbright မော်ဒယ်နံပါတ် Sun-900 စွမ်းအင်အရင်းအမြစ်လျှပ်စစ်အာမခံသက်တမ်းတစ်သက်တာပြီးနောက် ၀ န်ဆောင်မှုပြန်လည်ပေးအပ်ခြင်းနှင့်ပြန်လည်လဲလှယ်ခြင်းပစ္စည်းသတ္တု၊ ပလပ်စတစ်သက်တမ်း ၁ နှစ်အရည်အသွေးအသိအမှတ်ပြုလက်မှတ် ce ကိရိယာအမျိုးအစားခွဲခြားခြင်းအဆင့် ၂ ဘေးကင်းလုံခြုံမှုစံသတ်မှတ်ချက်မရှိအမျိုးအစားဆေးတံစိုစုပ်စက် Screen Hot-CE CE အတည်ပြုပြီးသား ICU မူးယစ်ဆေးဝါးပြန့်နှံ့ခြင်း Pump Sun-900 အပူပေးစနစ်လုပ်ဆောင်မှုရွေးချယ်မှုအလုပ်အမျိုးအစားများနှုန်း / အသံအတိုးအကျယ် / အချိန်အပိုင်းအခြားဘက်ထရီ ၁ ...
တစ် ဦး တည်းအသုံးပြုမှုပြုတ်ရည်စုပ်စက် SUN-500 စျေးပေါ icu ခရီးဆောင်လုံခြုံလျှပ်စစ်ပြုတ်ရည်ပြွတ်စုပ်စက်
ရှန်ဟိုင်း၊ တရုတ်အမှတ်တံဆိပ် Sunbright မော်ဒယ်နံပါတ် SUN-500 အာမခံ ၁ နှစ်အပြီးအပိုင် ၀ န်ဆောင်မှုပြန်ပို့ခြင်းနှင့်ပြန်လည်နေရာချထားခြင်းအမျိုးအစားခွဲခြားခြင်းအမျိုးအစား ၂ အမျိုးအစားပထမ ဦး ဆုံးအထောက်အကူကိရိယာများ၊ တစ်ကိုယ်ရေသုံးပြုတ်ရည်စုပ်စက်စျေးပေါသော Display ၄.၃ လက်မအရွယ်ကြီးမားသော LCD မျက်နှာပြင်အဝေးထိန်းစနစ် အဝေးထိန်းခလုတ်အချက်ပေးမှုလုပ်ဆောင်ချက်ဟုတ်သည်။ Multi-injection V mode၊ T mode နှင့်ကိုယ်ခန္ဓာအလေးချိန် Mode Built-in အားပြန်သွင်းနိုင်သည့်ဘက်ထရီသည် ၃ နာရီခန့်အလုပ်လုပ်ကိုင်နိူင်ပါသည်။
၁.၅ အလေးချိန်ပေါ့ပါးသောအလေးချိန်၊ သယ်ဆောင်ရန်အလွန်အဆင်ပြေသည်။
4. 192 cine-memory နှင့် 1024 ပုံရိပ်များအမြဲတမ်းသိုလှောင်မှု၏ 192 frames များကို။
၅။ USB connection နှင့် SD connection မှတစ်ဆင့် read-write လုပ်ဆောင်ချက်ကိုသဘောပေါက်လာသည်
၆. စွမ်းဆောင်ရည်အခြားစွမ်းဆောင်ရည်သည် laptop ကွန်ပျူတာကဲ့သို့စွမ်းအင်ချွေတာခြင်း၊ မောက်စ်နှင့်အခြားအရာများကဲ့သို့ဖြစ်သည်။
၇။ ပရော်ဖက်ရှင်နယ် software - အထွေထွေကုသရေးဆော့ဖ်ဝဲ၊ ကုသရေးသားဖွားဆော့ဖ်ဝဲ၊
၈။ ဗွီဒီယိုထွက်ပေါက်၊ ကွန်ပျူတာ၊ ပြင်ပမော်နီတာနှင့် HP ပရင်တာတို့နှင့်တိုက်ရိုက်ဆက်သွယ်ပါ
၉။ အရောင်ရှိသောမျက်နှာပြင်၊ ultrasonic area pseudo-color ကိုထောက်ပံ့သည်။
ရွေးချယ်မှုအတွက် ၁၀။ ဘက်ထရီအားသွင်းစက်
ဤကိရိယာသည် ECG, RESP, SPO2, NIBP နှင့် Dual-channel TEMP ကဲ့သို့သော parameters များကိုစစ်ဆေးနိုင်သည်။ ၎င်းသည်ကျစ်လစ်သိပ်သည်း။ သယ်ဆောင်နိုင်သောပစ္စည်းတစ်ခုဖွဲ့စည်းရန် parameter တိုင်းတာခြင်း module၊ display နှင့် recorder ကို device တစ်ခုထဲတွင်ပေါင်းစပ်ထားသည်။ တစ်ချိန်တည်းမှာပင်၎င်း၏ built-in အစားထိုးဘက်ထရီလူနာရွေ့လျားများအတွက်အဆင်ပြေသည်။
၁။ လျှောက်လွှာ။ အဗ္ဗဒူ၊ နှလုံးရောဂါ၊ သားဖွားမီးယပ် / သားဖွားမီးယပ် / ဆီးလမ်းကြောင်း / ရောဂါဗေဒ / အသေးစိတ်အပိုင်းများ / သွေးကြောဆိုင်ရာ / ကလေးအထူးကု / ကြွက်သားအစရှိသဖြင့်။
မည်သည့်အမှတ်တံဆိပ်တွင်မဆိုပရင်တာများနှင့်ချိတ်ဆက်နိုင်သော PC အခြေခံ Ultrasound ။
၆။ အသုံးပြုမှုအောက်တွင်၊ သင့်နောက်လုပ်ဆောင်မှုကိုလမ်းညွှန်ရန်အတွက်ဆွေမျိုးအကြံပေးချက်များသည်အောက်ခြေတွင်ပေါ်လာလိမ့်မည်။
၈. ပုံရိပ်အရည်အသွေးနှင့် ၁၇၅ ဒီဂရီကြည့်ရှုနိုင်သည့်ထောင့်။